साढे ४ लाख खोप प्रदेश पठाइँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोनाविरुद्धको साढे चार लाख खोप आइतबार प्रदेशमा पठाउने तयारी गरिएको छ । स्थानीय तहबाट खोप लगाउने फ्रन्टलाइनरको यकिन तथ्यांक संकलन नहुँदा खोप पठाउन ढिलाइ भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।
‘खोप लगाउनेको यकिन तथ्यांक आइतबार बिहानसम्म संकलन गरी बेलुका अबेर भए पनि खोप पठाउन लागेका छौं,’ विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भीमसिंह तिंकरीले भने । जिल्लागत विवरणका आधारमा प्रदेशमा खोप पठाउन लागिएको हो । १० लाखमध्ये दोस्रो चरणमा थप ४ लाख ५० हजार मात्रा पठाइने उनले बताए । ढुवानी गर्न खोपलाई आवश्यक पर्ने तापक्रमको उपकरण जडान गरिएको दुई वटा ट्रक तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १५ मा खोप लगाउन सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । विभागको योजनाअनुसार केन्द्रबाट प्रदेशमा खोप पुर्‍याउन दुई दिन र प्रदेशबाट जिल्ला अस्पतालसम्म पुर्‍याउन अर्को दुई दिन कम्तीमा लाग्ने अनुमान छ । प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेकै दिन खोप सुरु गर्न आइतबार जसरी भए पनि खोप प्रदेशमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
सोमबारसम्म प्रदेशमा पुर्‍याउने र बुधबारसम्म जिल्लामा पुग्यो भने मात्रै बिहीबार (१५ गते) देशभरि एकै पटक खोप लगाउन सकिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले खोप लगाउने मिति घोषणा गरिसक्नुभयो, कुन जिल्लामा खोप लगाउने कति हो ? यकिन तथ्यांक संकलन भने हुन सकेको छैन,’ विभागका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने । जिल्ला तहका स्वास्थ्यकर्मी, सफाइमा खटिने कर्मचारी, महिला स्वयंसेविका, एम्बुलेन्स चालक, शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउन लागिएको हो । खोप लगाउन जिल्ला अस्पतालमा बुथ बनाउन लागिएको छ । खोप लगाएपछि हुन सक्ने असरको निगरानी गर्न छुट्टै टोली परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
कर्णालीमा झन्डै १२ हजारलाई खोप लगाइने
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशमा पहिलो चरणमा झन्डै १२ हजार जनालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने भएको छ । आइतबारसम्म खोप कर्णालीमा आइपुग्ने र एक साताभित्र सम्बन्धितलाई दिइने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । संघीय सरकारले कर्णालीका लागि करिब ५४ हजार डोज खोप छुट्याएको जानकारी आए पनि पहिलो चरणमा ११ हजार ७ सय ८० डोजमात्र आउने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. रवीन खड्काले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई खोप दिइनेछ । ‘योपल्ट जिल्ला अस्पतालमै खोप केन्द्र तोकेर खोप लगाउने योजनामा छौं,’ उनले भने ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ०९:०२
झिल्टुङमा दौडिए आमाहरू
काठमाडौँ — पाँचौं झिल्टुङ क्रसकन्ट्री दौड च्याम्पियनसिपमा शनिबार सुमन कुलुङ राई र हुमी बुढामगर च्याम्पियन भएका छन् । नुवाकोटको बेल्कोटगढी नगरपालिका–५ मा भएको क्रसकन्ट्री दौडमा सुमनले प्रतियोगितामा नयाँ कीर्तिमान बनाए ।
उनले ५४ मिनेट ५५ः०९ सेकेन्डमा १३.४ किलोमिटरको दूरी पार गरे । उनले पूर्व विजेता किरणसिंह बोगटीको नाममा रहेको ५६ मिनेटको कीर्तिमान तोडेका थिए । किरण १३ औं सागका स्वर्ण विजेता धावक हुन् ।
दोस्रो भएका आकाश राईले ५५ मिनेट ५८ः ५० सेकेन्ड र तेस्रो भएका राजेन्द्र तामाङले ५९ मिनेट २०ः०४ सेकेन्ड लगाए । महिलातर्फ हुमीले १ घण्टा १३ मिनेट २३ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरिन् । उनले १३औं सागमा दुवाथलनमा रजत जितेकी थिइन् । वन्दना राईले १ घण्टा १७ मिनेट ५८ सेकेन्ड र एपीएफकी आशा राउतले १ घण्टा २० मिनेट २५ सेकेन्डबाट दोस्रो र तेस्रो स्थान हात पारे । दुवैतर्फका विजेताले १५ हजार, दोस्रोले १० हजार र तेस्रो हुनेले ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत खेलाडी विधाकी महिला विजेता हुमी बुढामगर । तस्बिर सौजन्य : एनएसजेएफ
प्रतियोगिताको आकर्षण रहेको आमा समूहतर्फ गत वर्षकी विजेता सन्तुमाया श्रेष्ठले उपाधि रक्षा गरिन् । विमला श्रेष्ठ दोस्रो र कल्पना श्रेष्ठ तेस्रो भए । उनीहरूले क्रमशः १० हजार, ६ हजार र ४ हजार पुरस्कार पाए । स्थानीयलाई दौडप्रति अपनत्व गराउन आमा समूहको दौड राखिएको आयोजकले जनाएको छ ।
स्थानीयतर्फ पुरुषमा प्रज्वल लामिछाने, नवीन भण्डारी र दिनेश भण्डारी, यू–१६ छात्रतर्फ दिनेश नेपाल, शिशिर तामाङ र अनिश भण्डारी तथा छात्रातर्फ दीपशिखा राई, अस्मिता दुलाल र सपना श्रेष्ठ क्रमशः शीर्ष तीन स्थानमा विजयी भए । ४.५ किलोमिटर खुलातर्फ छात्रमा विश्वराम कुँवर, उदय लिम्बु र प्रवीण ताम्लिङ तथा छात्रामा सरस्वती बोहरा, रेस्तिना सितिखु, अञ्जु खड्का क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भए । पाँचौं संस्करणसम्म आइपुग्दा दौड प्रतियोगिताले बेलकोटगढी नगरपालिकालाई चिनाउन मदत गरेको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिता गर्न बेलकोटगढी नगरपालिकाले ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको आयोजक वडा ५ का अध्यक्ष अनन्तराम नेपालले जानकारी गराए ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७७ ०८:५९